Chii chinobva kuLinux?
Kubva kuLinux (aka <° Linux) saiti yakapihwa kune misoro ine chekuita ne software y emahara matekinoroji. Chinangwa chedu hachisi chimwe kunze kwekupa vese vashandisi varikungotanga munyika ye GNU / Linux, nzvimbo iyo iwe yaunogona kuwana ruzivo rutsva nenzira yakapusa uye yakajeka kwazvo inogoneka.
Sechikamu chekuzvipira kwedu kune nyika yeLinux uye Mahara Software, kuDesdeLinux isu tanga tiri mudiwa we Yemahara ne 2018 chimwe chezviitiko zvakakosha zveiyo chikamu muSpain.
Iyo Kubva kuLinux yekugadzirisa timu yakaumbwa neboka re nyanzvi muGNU / Linux, Hardware, komputa chengetedzo uye network management. Kana iwe zvakare uchida kuve chikamu chechikwata, unogona titumire iyi fomu kuti uve mupepeti.
Avhareji mushandisi weLinux ane chishuwo chetekinoroji nyowani, gamer uye Linux pamoyo. Ini ndakadzidza, ndakashandisa, ndakagovana, ndakanakidzwa uye ndikatambura kubva muna 2009 neLinux, kubva kumatambudziko ane kutsamira, kernel panic, matema skrini uye misodzi mune iyo kernel kuunganidzwa, zvese nechinangwa chekudzidza? Kubva ipapo ndakashanda, kuyedza uye kukurudzira huwandu hwakawanda hwekuparadzirwa kwadzo dzandinofarira dziri Arch Linux inoteverwa naFedora uye yakavhurikaSUSE. Pasina mubvunzo Linux yaive nesimba rakakura pazvisarudzo zvine chekuita nedzidzo yangu uye nehupenyu hwebasa sezvo yaive nekuda kweLinux iyo yandaifarira uye parizvino ndiri kunanga kune nyika yekuronga.
Linux Tumira Kuisa
Sezvo ini ndaive mudiki ndakada tekinoroji, kunyanya zvine chekuita zvakananga nemakomputa uye maOperating Systems avo. Uye kweanopfuura makore gumi nemashanu ndadonha zvine rudo murudo neGNU / Linux, uye zvese zvine chekuita neFree uye Open Source Software. Kune izvi zvese uye nezvimwe, nhasi, saComputer Injiniya uye nyanzvi ine chitupa chepasi rose muLinux Operating Systems, ndanga ndichinyora nechido uye kwemakore akati wandei ikozvino, pane ino yakanaka uye inozivikanwa webhusaiti iyo DesdeLinux. Mariri, ini ndinogovana newe mazuva ese, zvizhinji zvezvandinodzidza kuburikidza nezvinyorwa zvinobatsira uye zvinobatsira.
Ini kuda kwangu kwekuvakwa kwemakomputa kwakanditungamira kuti ndiongorore iyo yepamusoro yepamusoro uye isingapatsanurike dungwe: iyo inoshanda system. Neshungu yakasarudzika yeUnix uye Linux mhando. Ndokusaka ndapedza makore akati wandei ndichiziva GNU / Linux, ndichiwana ruzivo rwekushanda sedhesiki rekubatsira uye nekupa rairo pamahara matekinoroji emakambani, kushanda pamwe muzvirongwa zvepachena zvemahara munharaunda, pamwe nekunyora zviuru zvezvinyorwa zvemadhijitari akasiyana midhiya yakasarudzika mu Open Source. Nguva dzose uine chinangwa chimwe chete mupfungwa: kwete kurega kudzidza.
Anoda Mahara Software uye nenyika yehurongwa. Ini ndakatanga muLinux nyika nekutenda kuMandrake 7 kugovera uye angangoita makore makumi maviri gare gare ini ndichiri munyika ino ndichigara ndichiita yangu zvishoma. Kubva ipapo, ini handina chete kuwana dhigirii kumberi ndichishandisa Mahara Software asi ini ndakaita akawanda zvinyorwa uye dzidziso pazviri.
Ndakatanga kufamba kwangu muLinux kumashure muna 2007, pamusoro pemakore andafamba kuburikidza nekuparadzirwa kusingaperi, ndakaona vazhinji vavo vachiberekwa uye vamwe vazhinji vachifa, kana zviri zvega zvandinoda ini ndaizosarudza ArchLinux naDebian pamusoro chero imwe. Ini ndashanda zvine hunyanzvi kwemakore senetiweki uye UNIX masystem maneja, pamwe newebhu webhu inogadziridza mhinduro dzakagadzirirwa mutengi.
Ini ndinoda kuzvinyudza munyika yeLinux, ndichishandisa mashandisirwo ayo, kunyanya ayo akaitirwa mabhizinesi. Iko Kusununguka kweKodhi kunoenderana zvakananga nekukura kweSangano. Ndokusaka Linux iri sisitimu isingagone kuvapo muhupenyu hwangu hwezuva nezuva.
Programmer uyo anofarira Linux nekuparadzirwa kwayo, zvakanyanya zvekuti chave chinhu chakakosha kune rangu zuva nezuva. Pese panobuda Linux-based distro nyowani, handigone kumirira kwenguva yakareba kuti ndiyedze, uye ndisvike pakuiziva kwazvo.